OweBucs uhehe izinhloli zase-Europe - Ilanga News
Home Ezemidlalo OweBucs uhehe izinhloli zase-Europe
Imenenja kaMhango ivumile ukuthi lo mdlali useyinyama
UMGADLI we-Orlando Pirates odabuka eMalawi, uGabadinho Mhango owenze ezibukwayo kwi-Afcon eqhubekayo eCameroon.
UDONSE iso lezinhloli zase Europe umdlali we Orlando Pirates oke wanuka iqaqa kule kilabhu ngenxa yokuziphatha budlabha ngaphandle kwenkundla. UGabadinho Mhango (29) odabuka eMalawi, wenze ezibukwayo emqhudelwaneni iAfrica Cup of Nations (Afcon) oqhubeka eCameroon. Ushayele izwe lakhe amagoli amqoka okwenze laqopha umlando njengoba lifinyelele okokuqala ngqa esigabeni somkhumulajezi salo mqhudelwano.
Nokho iMalawi igcine iphumile kulo mqhudelwano emuva kokuba iguqiswe yiMorocco ngo2-1 ngoLwesibili ebusuku. UMhango akazange aphoxe nakulo mdlalo njengoba eshaye inkunzimalanga yegoli elishiye abathandi bebhola bexoxa ngalo. Leli goli kulindeleke ukuba libange umklomelo wegoli lomqhudelwano ngendlela elibe lihle ngakhona. Leli phephandaba lihoshe ngemithomo yalo ukuthi indlela uMhango adlale kahle ngayo kulo mqhudelwano, kunezinhloli zase Europe ezithinta umphathi wakhe uMike Makaab, zifuna ukwazi ngesimo sakhe.
“Kuthiwa zigezeke igilo ngezikubone kulo mdlali kangangoba zifuna ukumsayinisa. “IPirates ingase ilahlekelwe yilo mdlali ngoba kunezinhloli zamakilabhu aseFrance, eBelgium naseGreece ezichazekile yilo mdlali ngendlela adlala ngayo. “Amakilabhu amaningi eEurope ashayekile ngasezimalini yingakho ebutha abadlali baseAfrika ngoba afuna ukukhipha imali engatheni. “Kodwake lolu daba belungakafinyeleli kwiPirates, bekusathintwe umphathi wakhe okunguyena okufanele aludlulisele kwiBucs. Inkinga wukuthi uMakaab umatasa njengoba elungisa udaba lukaSipho Mbule ofunwa uthuli yiKaizer Chiefs,” kusho umthombo. Leli phephandaba lishayela uMakaab ngalolu daba, ucingo lwakhe lukhale undendende engalubambi. Ethunyelelwa umlayezo ngeWhatsApp ushaye ngamafuphi wathi: “Yebo akhona amakilabhu amfunayo.”
Previous article“Impilo yosaziwayo kayibona ubukhazikhazi”
Next articleKUPHUME ISIDUMBU KUBANGWA INDAWO YOKUPAKA NOMFUNDO NGWANE USOLA